Abazali ukucabanga kuyaqabukela mayelana nendlela ukuthenga massage pad wamathambo for nokuvinjelwa izinyawo flat ezinganeni. Ngokuvamile ku ukuhlolwa nalehleliwe udokotela ohlinzayo noma izinkinga wamathambo kutholwa, futhi lo dokotela akushilo ngesidingo uhlikihla, kuhlanganise ngokusebenzisa ithrekhi ekhethekile.
Njengoba okuhlangenwe nakho okubonisa ukuthi abakhiqizi yesimanje ukunikela izimpahla wamathambo, akuwona wonke umuntu: abantu abaningi ungathandi intengo yemikhiqizo, abanye ungathandi izinga. Ezitolo kakhulu, ungathola amathrekhi unamathisele kubo izingxenye plastic ukuthi ukulingisa amatshe. Kulezi imikhiqizo, amatshe plastic kunalokho okusezingeni eliphezulu futhi abukhali, futhi zitholakala kude komunye nomunye, ngakho ukuhamba ku ingane ithrekhi ungakhululekile.
Ngomqondo onabile, lena isizathu esiyinhloko esenza abazali banquma ukwenza uhlaka massage ngomntwana ngezandla zakhe. Inketho engcono ithrekhi ekhaya kuyinto amatshe wamathambo: amatshe ngaphandle emakhoneni ebukhali, akhethiwe ukuphakama ukuze izinyawo uma uhamba kuwo zaba umthwalo encane. It bangahlangana phezu kolwandle ogwini olunamadwala noma uthenge ezitolo ezidayisa izimpahla etshalwe. Phela, amatshe asetshenziswa njengoba primer e okugcinwa.
Ukuze pad massage ngomntwana ngezandla zakhe ukwenza ngaphezu amatshe udinga isisekelo. It kufanela yimuphi amanikiniki ithrekhi eqinile, kodwa ungakwazi ukuthenga ekhethekile iraba mat. Ngaphezu kwalokho, uzodinga glue esobala noma abicah, ngawo ngeke unamatsisela ezimise okwama-tile. Ephambi kwezinduna zonke izinto zokwakha ukusebenza akuthathi isikhathi esiningi. Kubalulekile kuphela ukukhetha amatshe ukuze asishiya singenakho izikhala ezinkulu phakathi kwazo.
Uma ungenalo isikhathi ukwakha massage pad ngomntwana ngezandla zabo, ungabheka ongakhetha nge amatshe isendalini. Nokho, zikhona amathrekhi anjalo angaphezu kwangu-le amacansi nge plastic mbumbulu amatshe. Kodwa zinokwethenjelwa futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kubalulekile ukuphawula ukuthi mat enjalo ukala eningi, ngakho-ke kungcono ukunquma indlu endaweni ngaye, lapho uzoqhubeka ukuba aqambe amanga. Ngemva alo futhi eyayembuleka lokhu ithrekhi nsuku zonke kungaba nzima.
Kodwa lena akuyona indlela kuphela indlela ungenza mat massage ngokuba izinyawo nezandla zakhe. Ungakwazi umane thunga. Uma une ezimise okwama-tile, nakho izoya msebenzi. Thatha ndaba okuqinile, ugoba emkhatsini ngakho ukuthi waphuma ephelele usayizi mat, thunga it kusuka zombili - kufanele ushiye ephaketheni ezinkulu. Ukuze uthole izinga mat wamathambo ngezandla zakho, phinda phansi amatshe ephaketheni futhi sheathe izikwele zabo ezincane noma calandze.
Kodwa ungakhathazeki ukuthi ngeke zisebenze, uma ungakwazi ukuthola noma uthenga shingle. Massage mat ngomntwana ngezandla zabo, ungakwazi thunga ngaphandle kwalo. Dayela okusanhlamvu ezahlukene, thatha omisiwe ubhontshisi, uphizi noma ezinye imidumba thunga wabayisa ekhukhwini. Endaweni ehlukile, kungenziwa engxenyeni uhlaka okuyinto embondelene amabhola amazombe intambo obukhulu ithungwe noma izinkinobho ithungwe, enqwabelene ngendwangu noma zokwenziwa ukupheda.
Indlu izingane kuleli zwe ngezandla zabo
Uyini vane sezulu? Umlando Theory
Iphansi polymer ngezandla zabo. Iinsetjenziswa polymer emabhilidini
Lilia Ihhotela 4 * (Bulgaria, Golden Sands): izithombe kanye nokubuyekeza
Yokwelapha Ukuzivocavoca engaba waphuka: izeluleko kongoti
Electric isiginci ngezandla zakhe - okwenza
Ingulube yosiwe onion: ithenda, namanzi, oxubile
Strawberry ujamu. Recipe kanye Ukupheka Tips
A imithetho embalwa okunomsoco okunempilo ngoba ohlelweni lwezempilo niches
Lolu ketshezi Starch: Ukulungiselela kanye Isicelo
"RelaLife": yokusetshenziswa, ngempela